#Ffkm: hiala nenina farany? | mandimby maharo
#Ffkm: hiala nenina farany?
Posted on 15 April 2013 15 April 2013 by Mandimby Maharo
Miomakomana amin’ilay fotoana hampihaonana ireo mpanao politika amin’ny 18 aprily izao ny ao amin’ny Ffkm. Fakan-kevitra tamin’ireo vondron’kery samihafa te handray anjara amin’izany no notontosain’ireo filoham-piangonana kristiana ireo ny herinandro lasa teo. Fakan-kevitra izay nentina indrindra handaminana ny ho endrika sy foto-kevitry ny fihaonana eo amin’ireo vondron-kery ireo izay kasaina ho atao eny amin’ny ivontoerampivoriana iraisam-pirenena Ivato. Raha heverina manko hatrizay fa ho fampihavanana ireo mpanao politika tsy mitovy hevitra no ho atao dia hihitatra amin’ireo vondrona hafa sivily sy ny miaramila ny fihaonana amin’io fotoana io.
Tsy hisalovana ny anjara asan’ny Filankevitra Fampihavanana Malagasy tarihin’ny Jeneraly Rabotoarison, izay rafitra nomen’ny tondrozotra fahefana sy hampihavana ny mpanao politika ny FFKM. Manoloana ireo tsikera momba ny Ffm izay vao natsangana nefa dia ilaina tokoa ny fanampina azy mba hahatontosa ny andraikiny. Hatreto aloha dia mbola tsy fantatra mazava izay ho fanatontosana izany fampihavanana ho ataon’ny Ffm izany, ary io indrindra no nahatonga ny Ffkm hijoro mba tsy hampitarazoka izany intsony. Fampihavanana izay averimberina fa dingana iray tsy maintsy atao hisin’ny fitonina alohan’ny hisin’ny fifidianana afaka efatra volana. Io fivoriana ho tarihin’ny Ffkm io izany no anjara andraikiny hampivondronana ny Malagasy hiara hientana hamoahana ny firenena amin’izao olana sedrainy izao
Maro amin’ireo vondron-kery misy eto Madagasikara no mankasitraka sy nanambara fa handray anjara amin’izany fihaonana ho iarahana amin’ny Ffkm izany. Ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka aza, araka ny resaka nataony tao amin’ny onjapeo RFI dia mikasa ny hody indray eto an-tanidrazana hanatrika io fihaonana io. Ireo izay ao amin’ny fitondrana dia tsy mametraka olona amin’izay mety ho fihaonana indray. Amin’izy ireo dia rehefa voahaja fotsiny ny datim-pifidianana dia azo atao avokoa izay fihaonana heverina fa hampirindra izany fifidianana izany araka ny voafaritry ny tondrozotra.
Nefa raha izao fihetsiketsehana ataon’ny Ffkm izao dia toa mampiseho fisalasalana eo amin’ny fahombiazan’ny tondrozotra. Toa milaza manko izao fikarakarana fivoriana izao fa na dia efa mipetraka daholo aza ny rafitra ara-panjakana amahana ny krizy dia ilay fihavanana ; fototry ny ho filaminan’ny fifidianana mihintsy no tsy tafapetraka. Mety hidika ho tsy fahatokisana ny fahombiazan’izay voalazan’ny tondrozotra koa izao. Toa mifanandrify amin’ireo fisalasalana ny amin’ny tsy fitongilanan’ny FFM loatra manko izao fivoahan’ny hevitra avy amin’ny Ffkm izao. Ao anatin’ny fe-potoana fanaterana ny antotan-taratasy firotsahan-kofidina koa isika izao. Inona koa araka izany fa tsy maintsy hisy fiantson’ireto Raiamandrenim-piangonana ireto ireo kandida ireo. Kandida izay hita avy hatrany koa fa efa misy sahady ny fifanenjehana eo amin’izy ireo